MANAM-PANAHY SY TSY MANAM-PANAHY · L'Homme, son aura et son évolution
> MANAM-PANAHY SY TSY MANAM-PANAHY
Alika ity, tsy manam-panahy io, tsy afaka ny hanaja anao. Mitovy amin’ny fifandraisany amin’izy samy alika ihany no andraisany anao. Na tsy afaka hanaja anao aza nefa izy, tsy ho ambony noho ianao izy akory. Ny fanahy no tsy itovizany amin’ny olona manam-panahy.
Olona ity, manam-panahy io, afaka ny hanaja anao. Ny fanahy no olona ary ny fanahy no mampiavaka antsika amin’ny biby. Mapiseho ny hajany sy ny hajany ny olona manaja ny hafa.